Warsaxaafadeed ku aadan kulankii golaha wasiirada ee uu gudoominayey Farmaajo – SBC
Warsaxaafadeed ku aadan kulankii golaha wasiirada ee uu gudoominayey Farmaajo
Posted by editor on Juun 16, 2011 Comments
Warsaxaafadeed goor dhaweyd ka soo baxay xafiiska Ra’isalwasaaraha DKMG Soomaaliya gaar ahaan qaybta warfaafinta ayaa looga hadley waxyaabihii lagu soo qaaday kulankii ay maanta Muqdisho ku yeesheen golaha wasiirada, kulankaasi oo uu shir gudoominayey Ra’isalwasaare Maxamed C/laahi Maxamed (Farmaajo) ayaa waxaa looga hadley dilkii Fazul Cabdalla, dagaalada ka socda gobolka Hiiraan & arimo kale.
Warsaxaafadeedka ayaa u qornaa sidatan.
Xukuumadda Federaaliga KMG ee Soomaaliya
Ref: XRW/War-Saxaafadeed 104/06/11 Date: 16 June 2011 Date: 1.2.011
Muqdisho, Khamiis, 16 June 2011 – Shir ay yeesheen golaha wasiirada oo uu shir-guddoominayey Ra’iisul Wasaaraha Somalia Mudane Maxamed Cabdullahi Maxamed (Farmaajo) ayaa looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin amniga, dilkii Fazoul Abdullah Mohamed, arrimaha siyaasadda iyo dib u habeynta Agaasimayaasha Guud iyo arrimo kale.
Golaha Wasiirada waxey warbixin ka dhageysteen Wasiiru Dowlaha Wasaaradda Difaaca oo golaha siiyey warbixin la xiriirta amniga guud, gaar ahaan howlgalada ka socda gobolada dalka sida Gedo iyo Hiiraan iyo dilkii dhowaan ay ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed ay ku dileen horjoogihii Al-Qaeda ee Bariga Afrika, Fazuol Abdullah Mohamed. Golahu waxey ammaan u soo jeediyeen ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyo sidii geesinimada laheyd ee ay u dileen hoggaamiyaha Al-Qaeda ee Bariga Afrika. Golaha sidoo kale waxey warbixin ka dhageysteen Agaasimaha Nabasugidda Qaranka. Dood dheer ka dib waxaa la isku raacay in la adkeeyo amniga bacdamaa kooda Al-Shabaab jab weyn loo geystay, lagana fili karo in ay fuliyaan falal argagax iyo dhib joogta ah u keeni kara shacabka soomaaliyeed.
Ugu danbeyntii Wasiirka Haweenka iyo horumarinta qoyska Drs Maryam Qasim ayaa golaha soo hordhigtay shaqsiga ay u aragto inuu mudan yahay in laga dhigo agaasimaha guud ee wasaaradda Haweenka. Wasiiradu waxey golaha u akhrisay taariikh nololeedka shaqsigii ay u soo xushay. Dood dheer ka dib golaha wasiiradu waxey isku raaceen in Mudane Mohamed Omar Nur uu noqdo Agaasimaha Guud ee Wasaaradda Haweenka iyo Horumarinta Qoyska.